kanjani ukubheka izitshalo ezimangalisayo ezifana Tulips! Phela, iningi ukuphila yaleli mbali enhle esiqhutshwa nenkathi ebandayo. Kusukela mzuzu lokubikezela, iwe, ngesikhathi Tulip iqala ukukhula yisithombo amaqabunga asebenzayo isibani, ephumelelisa ebusweni inhlabathi. Futhi kulesi sifundazwe isitshalo enkulu uchitha sonke ebusika. Futhi isizini efudumele, lapho zonke ezinye izimbali ejabulela imisebe yelanga elikhanyayo, lesi sitshalo kuba ithule, phakathi kwesikhathi lapho e isibani Umama uqala ukwakha ihlumela elisha.
Indlela ukutshala Tulips ekwindla kanye akawenzi amaphutha?
Mhlawumbe hhayi phansi kwanoma yimuphi umuntu lowo okungenani kanye kalasilingo ubuhle zalesi sitshalo yohlobo oluthile futhi abazange bazame ikhule ku isimangaliso abo ama. Kodwa ngezinhlanzi nezinkwa ezimbalwa nje babekwazi ukuthola esimweni samanje, sikufisela inhlanhla. Ukuqhubeka sicabanga ngalokho ukutshala Tulips ekwindla, kodwa akawatholanga lo mbuzo impendulo efanele, ukwenza amaphutha efanayo futhi musa sifinyelele elamukelekile. Ekugcineni, bamane bazitike kuyinjabulo zibabaza Tulips. Kodwa, uma uthatha futhi baqonde lutho izindlela zokulima zalesi sitshalo esimangalisayo eziyinkimbinkimbi engekho, futhi zonke izimfihlo zizalela, ngokuyinhloko esekelwe ulwazi biology kummeleli ejwayelekile ka isibani izimbali.
Njengoba ekwindla zokutshala Tulips kwesokudla?
Ngaphambi kokuthi uqale ukutshala izimbali, udinga ukudala kwezimo ezifanele kubo: endaweni ivikelwe ngokuphelele emimoyeni ebandayo futhi okwanele. Uma ilanga seliphansi impela, lesi sitshalo uyodonsela ngeziqu futhi babe Curves ukuthi abe nomthelela omubi lonke ifomu sangaphandle izitshalo. Emthunzini ama nje abakwazi buthelela inqolobane ezithile izakhi yezimbiwa. Kodwa ehamba phezu ukutshala umoya hhayi kakhulu kuphela kunciphisa isikhathi izimbali, kodwa ungakwazi ukugqashula isimangaliso elimnandi.
Indlela ukutshala Tulips , kungakangeni ubusika futhi ukugcina zonke izimo ngoba izimbali zabo?
Amazinga eliphezulu sokuqhubeza ukukhula ama kuyinto 6 - 10 degrees Celsius. Uma amanani ephakeme noma engezansi izimpande ukuthuthukisa zimbi kakhulu. Kule ndaba, lesi sitshalo kumele ngatshala, kanti uma umhlabathi endaweni ka-15 cm in the lokushisa ukujula ukuba bawele 9 degrees. Mid-Okthoba - lena enkathini yokugcina ukufika, ngoba inqubo kucedvwa kuzothatha cishe 3 amaviki futhi kufanele iphele ngaphambi ukuqala ebusika. Izinhlobonhlobo ukuthi uqale eziqhakaza ngaphambili kunabanye, kubalulekile ukuba batshale emasontweni ambalwa ngaphambili.
Indlela ukutshala Tulips ekwindla, ngakho okungijabulisile kwentwasahlobo?
Ukuze ekuvimbeleni izifo ezihlukahlukene okuyinto lezi individualistic emaningi khona, ama kufanele ukumelana isixazululo 0.15% potassium permanganate amahora ambalwa. Ngemva kwalokho, basuke ehlwanyelwe enhlabathini, ngoba umswakamo ubangela ukuthuthukiswa kohlelo impande. Ibanga kumugqa futhi isihlalo ukujula encike ngqo kwi ubukhulu ama, ngoba kunangendlela ngobukhulu, kulapho-ke kuyodingeka izakhamzimba. Ngokuyinhloko kokufika ukujula kuchazwa njengoba ukuphakama ikhanda 3, amakhulu - 15 cm, ukujiya - njengoba 2-ubukhulu imbewu eziyizigaxa. Kulesi zokutshala kungenzeka izitshalo wesifunda nhlobonhlobo, eziyisisekelo - ukuhambisana lokubikezela ukuminyana scheme: encane - 70 izingcezu ngamunye imitha square, futhi ama ezinkulu - mayelana 50 izingcezu ngamunye imitha square.
Kulesi sihloko, thina ngaye ukutshala Tulips ekwindla. Manje-ke konke kuxhomeke ekuzimiseleni yakho futhi sifisa ukuba ujabulele izimbali entwasahlobo ka lezi zimbali ezinhle.
Ampelnye petunia - umhlobiso balcony kanye zezimbali
Iphansi ephansi. Ukubhekwa okuhle, okuqinisekisa ukuphepha nenduduzo yengane
Beagle (inja). nomdlwana Beagle. Beagle - ukuzingela inja
Kerry, John (John Forbes Kerry). Wezangaphandle Dzhon Kerri
Lapho toxemia ngesikhathi sokukhulelwa uphela?
Polyester resin kanye epoxy resin: ngokungafani, izici kanye nokubuyekeza
Udadewabo womyeni ukuba unkosikazi ngokuthi?
Eshiswa lymph node entanyeni. Okufanele ukwenze zokudambisa isimo?